करोडौं मूल्यको अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्यायौं –योगेन्द्रमान श्रेष्ठ | eAdarsha.com
पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर १३ कुँडहरमा २०१५ सालमा जन्मिएका योगेन्द्रमान श्रेष्ठ सामाजिक एवं धार्मिक व्यक्तित्व हुन् । उनले २०५२ सालदेखि २०७८ सालसम्म लगातार २६ वर्ष गणेश तथा भद्रकाली मन्दिर सेवा समितिको सचिवको रुपमा काम गरे । पछिल्लो क्रममा उनी सो समितिको अध्यक्षको भूमिकामा छन् । सामाजिक र राजनीतिक परिवारको सदस्यको हिसाबले उनी सानैबाट समाज सेवातर्फ आकर्षित भए । १७ वर्षको उमेरमा नै युवक संगठन खोलेर सामाजिक काममा उनी संलग्न भए । पञ्चायती प्रतिबन्धको त्यो समयमा युवक संगठनमार्फत् प्रहरी प्रशासनको आँखा छलेर राजनीतिक गतिविधिमा समेत संलग्न हुने गरेको श्रेष्ठले स्मरण गरे । मिडियासमेतको सहयोगमा भद्रकाली गुठीको ३७ रोपनी अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउन आफ्नो समिति सफल भएको उनको दाबी छ । अध्यक्ष श्रेष्ठसँग भद्रकाली मन्दिर र उनले समाजसेवामा पु¥याएको योगदानलाई केन्द्रित गरी आदर्श समाजका रुपनारायण ढकालले गरेको कुराकानी यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
समाज सेवामा यहाँले पु¥याएको योगदानलाई कसरी स्मरण गर्नुहुन्छ ?
म सानै उमेरदेखि समाजसेवामा संलग्न भएको हुँ । हामीले युवक संगठनको स्थापना गरी सामाजिक र राजनीतिक कामहरु अगाडि बढायौं । २००९ सालमा कुँडहरमा स्थापना भएको अरण्यज्योति पुस्तकालय २०१७ सालको राजीनिक कू सँगै लथालिंग अवस्थामा थियो । अग्रजहरुले स्थापना गरेको पुस्तकालय कोही विदेश जाने र कोही गृहस्थ जीवनमा व्यस्त भएका कारण लथालिंग अवस्थामा थियो । यस्तो अवस्थाको पुस्तकालय संरक्षण र पुनस्र्थापनाका लागि २०३१ सालमा युवक संगठनको अध्यक्षको रुपमा मैले काम अगाडि बढाएँ । ६ वर्ष पुस्तकालयको अध्यक्षको रुपमा काम गर्दै गर्दा पुस्तकालयसँगै अरण्यज्योति पुस्तकालय पार्कको विकास गर्न पनि भूमिका खेलें । समाजसेवी रमेशकान्त सिग्देललाई पार्क निर्माण समितिको अध्यक्ष बनाएर भैलो खेलेको पैसा र नगरपालिकाबाट सहयोग लिएर हामीले पार्कलाई घेराबन्दी गर्ने काम गर्‍यौं । त्यो बेला भूमाफिया र विद्यालयहरुले समेत फराकिलो जग्गा र चौर देखेपछि ओगट्ने चलन थियो । यस्तो कार्यबाट जोगाएर हामीले पार्क बनायौं । यसरी म समाजसेवामा लागेको हुँ । नुहाउन पौडी खेल्न जाँदा पनि ८/१० जना साथीहरु लिएर म हिँड्थें । २०२० सालको एसएलसी पछि पृथ्वीनारायण क्याम्पस पढ्न गइयो । नेविसंघको सदस्यता लिएर राजनीतिमा पनि लागियो । तर पनि पढाइलाई निरन्तरता दिन सकिएन । सामाजिक काम गर्ने र घरको काम नहेर्ने भएपछि घर व्यवहार बिग्रने भयो । त्यसपछि साथीभाइको सहयोगमा म जापान गएँ र ७ वर्ष त्यहाँ बसें । २०५२ सालमा नेपाल फर्केर आएँ । २०४६ सालको आन्दोलनमा सहभागी हुन पनि पाइनँ । राजनीतिमा टाउको फोर्ने बेलामा आन्दोलनको बेलामा भाग नलिएपछि पछि आएर भाग खोज्न पनि मिलेन । म फर्केको समयमा भद्रकाली मन्दिरमा अधिवेशन हुने बेला रहेछ । २०५२ साल जेठमा नेपाल आएपछि भदौमा मन्दिरको सचिव भएँ । साधारण सदस्य पहिला नै थिएँ । २०५२ भदौ २४ बाट २०७८ मंसिर ४ गतेसम्म म सचिव भएँ । अधिवेशनबाट अध्यक्ष बनाइएँ ।
भद्रकाली मन्दिर क्षेत्रमा के कस्ता विकास निर्माणका कामहरु भएका छन् ?
मन्दिर क्षेत्रमा पानी टंकी र सिँढी बनाउने, बिजुली लाने, मठमन्दिर मर्मत सुधार र रंगरोगन तथा संरचनाको पुनर्निर्माणका काम भएका छन् । मन्दिर क्षेत्रलाई देवी पञ्चायन शक्तिपीठको रुपमा विकास गरेर जाने भन्ने गुरुयोजना पनि बनेको छ । एउटा शिवालय बनाउने र सूर्यनारायणको मन्दिर स्थापना गरेर कालीलाई माझमा राख्ने योजना छ । २०७२ सालको महाभूकम्पले भद्रकाली मन्दिरमा क्षति पुगेको छ । यसको पुनर्निर्माण गर्न पुरातत्व विभागसँग स्वीकृत लिएका छौं । मन्दिर मात्र पुनर्निर्माण गर्न ४ करोड ८२ लाख रुपैयाँ लाग्ने डिजाइन र स्टिमेट तयार छ । अहिले स्रोत जम्मा गर्ने क्रममा छौं । नेपाल सरकारसँग पनि अनुरोध गरेका छौं । भविष्यमा यहाँ गुरुकुल आश्रम चलाउने, मन्दिर वरपर पैदलमार्ग बनाउने, उत्तरी भागलाई रमणीय बनाउने लगायत योजनाका लागि १० करोड रुपैयाँ लाग्ने गुरुयोजना तयार भएको छ । मन्दिरको मात्र आम्दानीले यत्रो खर्च जुट्दैन । अहिले हाम्रो आम्दानी जम्मा ४० लाख रुपैयाँ हाराहारीमा मात्रै छ ।
मन्दिरको गुठीअन्तर्गतका जग्गा के–कस्तो अवस्थामा छन् ?
पुराना गुठियारा र मन्दिरलाई रेखदेख गर्दै आएका परिवारका कतिपय सदस्यले विगतमा मन्दिरको जग्गा निजी रुपमा दर्ता गर्न अगाडि सरेको अवस्था पनि रह्यो । केही जग्गा दर्ताकै क्रममा रहेको र केही आफ्नो नाममा दर्ता गरिसकेको पाइयो । त्यसपछि हामीले सामाजिक काममा केही रकमको विकास निर्माणको सानोतिनो काम गरेर गर्व गर्नुभन्दा २ सय वर्षदेखि संरक्षित हुँदै आएको देवश्व हाम्रो पालामा नै हिनामिना हुन्छ कि भन्ने डरले त्यो सम्पत्ति संरक्षण गर्ने अभियानमा लाग्यौं । मन्दिरको गुठीअन्तर्गत डाँडा र समथर गरेर कूल १ सय ३० रोपनी जग्गा रहेको छ । समथर जग्गामात्र ३७ रोपनी रहेको र यो व्यक्तिको नाममा गइसकेको अवस्था थियो । यस्तो अवस्थामा हामी एक्लै मुद्दा लड्दा हामीले जित्ने र जग्गा फिर्ता हुने सम्भावना कम थियो । त्यो बेला मिडियाको पनि सहयोग लिइयो । तर कति सञ्चारकर्मी त लेख्न पनि हिचकिचाए । भद्रकालीको मन्दिरमा भूमाफियाको नंग्रा भनेर आदर्श समाज राष्ट्रिय दैनिक लगायत पत्रिकामा समाचार आयो । यसले मुद्दा जित्ने आधार तयार भयो । म भद्रकाली मन्दिर सेवा समितिको तर्फबाट अख्तियार प्राप्त व्यक्ति भई मैले जिल्ला अदालत, मालपोत कार्यालय, पुनरावेदन र सर्वोच्च अदालत सम्म १७ वर्षसम्म मुद्दा लडेर जिती अहिले श्री गणेश तथा भद्रकाली गुठी भनेर लालपूर्जा बनाउन सफल भएँ । ३ सय करोड मूल्य बराबरको व्यक्तिहरुको नाममा पुगेको मन्दिरको अतिक्रमित जग्गा सर्वोच्चमा पुगेर फर्काएर ल्याउन सफल भयौं । यसका अतिरिक्त ढेवाजू परिवारले कुँडहरमा दिएको करिब ३ रोपनी जग्गा र थापा कार्की, रायमाझी, सत्यकुमारी भक्तिकुमारीको पहलमा प्राप्त औद्योगिक क्षेत्र अगाडि मान्द्रे भन्ने ठाउँमा ६ रोपनी जग्गा छ । यी २ जग्गा १ सय ३० रोपनी बाहेकका हुन् । यी जग्गा मन्दिरको नाममा आउन बाँकी नै छ ।
भद्रकालीको धार्मिक महत्वबारे बताइदिनुस् न ।
१९०१ सालमा भद्रकाली मन्दिरको लालमोहर भएको र सुरुमा रामचन्द्र खत्रीले गणेश मन्दिर स्थापना गरेको देखिन्छ । गणेश मन्दिरको पूजा गर्दै जाँदापछि भद्रकाली देवीले ‘म पनि यहीं छु, मेरो कसैले सोधखोज गरेनन्, मेरो पनि सोधखोज गरेर पूजा गरेमा तिम्रो परिवारलाई र तिम्लाई लाभ हुने छ’ भनेर गौंडाका मुखका ढेवाजू परिवारलाई सपनामा भने अनुसार मन्दिर परिसरमा खोतलेर हेर्दा श्याम वर्णको शिला देखिएको र तिनैलाई देवी मानेर पूजा गर्न थालिएको भनाइ छ । पछि ढेवाजू परिवार काठमाडौं गई अष्टभुजको ठूलो मूर्ति ल्याएर प्रतिष्ठापित गरिएको हो । अहिले मन्दिर भएको थाप्लो सुरुमा मुडुला थुम्की, त्यसपछि गणेश मन्दिर स्थापनासँगै गणेश थुम्को र भद्रकालीको महिमा र प्रचारले पछि भद्रकाली डाँडा नामकरण भएको हो । आराध्यदेवीको रुपमा वरपरका बासिन्दा र पोखरावासीले यस क्षेत्रमा पूजा गर्छन् । पोखराको पूर्वी भेकमा पर्ने भद्रकाली मन्दिरसहित विन्ध्यवासिनी र तालवाराही पोखराका प्रमुख शक्तिपीठ मानिन्छन् । भद्रकालीलाई धेरैले कुलदेवता र आराध्यदेवीको रुपमा पुज्छन् । भाकल र मनोकामना पूरा हुन्छ भन्ने मान्यताअनुसार कालीलाई दान गर्छन् । यहाँ लक्ष्मीनारायण मन्दिर र हनुमानको मूर्ति पनि छन् । दसैंमा नवरासत्रभरि यहाँ मेला लाग्छ । चैतेदसैंमा पनि भीड हुन्छ । मंगलबार, शनिबार र पूर्णिमा पनि पूजा हुन्छन् । विवाह, व्रतबन्ध, संकल्प पूजाहरु, शतवीज छर्ने, नयाँ वर्ष र चैतेदसैं मेला तथा शुक्लपक्षको अष्टमी तिथिमा महाआरती जस्ता गतिविधि यहाँ हुन्छन् । यहाँ बलिलाई प्रतिबन्ध नै त गरिएको छैन तर यसलाई निरुत्साहित गर्दै गइरहेका छौं ।
गुरुकुल आश्रम, मन्दिर वरपर पैदलमार्ग, उत्तरी भागलाई रमणीय बनाउने लगायत योजनाका लागि १० करोडको गुरुयोजना तयार भएको छ
पछिल्लो क्रममा मन्दिर क्षेत्रका रुखबिरुवा काट्दा आलोचना भयो, यस्तो किन गर्नुभयो ?
मन्दिर क्षेत्रलाई धार्मिक तथा पर्यटकीय हिसाबले विकास गर्ने र यस क्षेत्रलाई राम्रो बनाउने भन्ने सिलसिलामा नेपाल सरकारको वन कार्यालयसँग समन्वय गरेर, चिठी लेखेर र स्वीकृति लिएर केही रुख काटिएको हो । इलाका वनका अधिकृत लेबलका जिम्मेवार व्यक्ति आएर आएर ठीक छ भनेपछि यो काम अघि बढेको हो । २/४ वर्षमा यसरी यहाँ रुखहरु काँटछाँट गर्ने गरिएको छ भन्ने जानकारी गराएर मन्दिरको उत्तरी पूर्वी भागमा दृष्यावलोकनका लागि सहज बनाउन र मन्दिर क्षेत्रलाई उज्यालो बनाउने हिसाबले रुखको माथिल्लो भाग काटिएको हो । यस्तो काम हुँदै गर्दा नागरिक समाजका तर्फबाट यो कार्यको आलोचना भयो । रुख काट्नु हुन्न भन्ने उहाँहरुको कुरा पनि वातावरणीय हिसाबले ठीकै हो । वन संरक्षण हाम्रो पनि नीति हो । २ वटा रुख काट्दा हामी सयवटा रोप्छौं । कतिपय अवसरमा मन्दिरमा एकै दिनमा हजारौं भक्तजन आउँछन् । उनीहरुका लागि पाटीपौवा बनाउन पनि जग्गा चाइने हिसाबले पनि रुखहरु काटिएको हो । पर्वको बेला ५ हजारसम्म मानिस आउँछन् । तर पनि जनगुनासो आएपछि रुख काट्ने काम रोकियो । काटिएका काठ त्यहीं राखेका छौं । हामीले रुख जरैसँग काटेका पनि होइनौं, हाँगा र टुप्पोमात्र काटेर वनलाई राम्रो बनाउने हिसाबले गोडमेल गरेका हौं । तैपनि काट्न पाइन्नँ भन्ने कुरालाई पनि सम्मान नै गर्छाैं । मन्दिर क्षेत्रलाई धार्मिक तथा पर्यटकीय हिसाबले विकास गर्ने योजनाअनुरुप वनलाई राम्रो बनाइएको छ । वनमा आयमूलक प्रजातिका भनेर रुद्राक्ष, अमला, हर्रो, बर्रो, लप्सी, दालचिनी प्रजातिका रुख रोपेर र भइरहेका प्रकृतिक वनस्पति संरक्षण गरेर राखिएको छ ।
केही वर्ष पहिला मन्दिरकै जग्गामा ठूलो पोखरी खन्नुको कारणबारे पनि बताइदिनुस् ।
गुठीको जग्गा संरक्षणको मुद्दा त जितियो तर जग्गाको विषयलाई लिएर पुरानो कमाइ खाइरहेका मानिस र पुजारीले मोहियानी हकको कुरा उठाए । मोहियानी गर्छु भन्न थाले । कमाउन दिइराखे त एकदिन मोहियानीको कुरा आउन पनि सक्ने भयो । हाम्रो राज्य त्यस्तै छ, पछि राज्यले एक÷एक ओटा घडेरी कमाउँदै आएकालाई दिऊँ भन्ला । यस्तो अवस्थामा मोहीहरुसँग अनुरोध गरेर जग्गालाई बाँझो राखेर भद्रकाली शान्ति वाटिका (पार्क) बनाउने कुरा भयो । भाइछोराले जागिर पाउँछन्, मन्दिर क्षेत्रमा धार्मिक पर्यटक बढ्छन्, घर भाडामा जान्छन् र आर्थिक उन्नतिमा टेवा पुग्छ भनेर पार्कको कुरा ल्याइयो । सेती गण्डकीको पानी छँदै थियो र पछि पोखरी पनि त्यहाँ खनियो । पार्कको सौन्दर्यको लागि पोखरी खनिएको हो । त्यो बेलाको सुकुमवासी र माओवादीको सन्दर्भलाई समेत ख्याल गरेर पोखरी बन्यो । भविष्यमा फोहोरा र डुंगा चलाउने योजना पनि छ । मन्दिर क्षेत्रको जग्गा विगतमा जसको शक्ति उसको भक्ति जस्तो गरी हिनामिनाको अवस्थामा थियो । पोखराको जग्गा महँगो हुँदै जाँदा जग्गासम्बन्धी मुद्दा मन्दिरले जितेपछि पनि वरपरका मानिसले डाँडालाई तासेर भान्सा र शौचालय बनाउने जस्ता काम गरे । २/४ लाख विकास गर्नेभन्दा सम्पत्ति संरक्षण गर्ने भनेर मन्दिर वरपर कम्पाउन्ड लगाइएको छ । भद्रकालीको पेरिफेरी ९ सय ५० मिटर छ । ७ सय मिटर घेराबन्दी गरियो । १/२ ठाउँमा केही विवाद छ । मिलाएर अगाडि बढ्छौं र विस्तारै पूरै घेर्छौं । त्यसपछि यसलाई बढी उपयोगी र मन्दिरको सम्पत्ति समाजले अझ राम्रो तरिकाले उपयोग गर्न सकोस् भनेर वरपर प्रदक्षिणा मार्ग विकास गर्ने छौं । पोखरामा समथर जग्गाको बीचमा गोलाकार रुपमा रहेको यो भद्रकाली थुम्को प्रकृतिको ठूलो वरदान हो । यो पोखराको रत्न पनि हो ।
प्रजातान्त्रिक विचारधारा राख्ने र राजनीतिसँग जोडिएको परिवारको सदस्य भएर पनि तपाईं राजनीतिमा किन लाग्नुभएन? हालै स्थानीय चुनावबाट चुनिएका जनप्रतिनिधिलाई के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ ?
एउटा व्यक्ति धेरै संस्थामा जोडिंदैमा सबैतिर काम गर्न भ्याइन्नँ । कि काम नभएको जोगीजस्तो हुन प¥यो । घरपरिवार पनि मिलाउन पर्‍यो । मुख्य कुरा राजनीति युवाले गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । युवा जाँगरिला हुन्छन् र केही गर्न सक्छन् । मेरा केही दाजुहरु राजनीतिमा लागेका कारण एकै ठाउँमा एकै परिवारका सदस्य आपसमा प्रतिस्पर्धा गर्ने कुरा पनि भएन । म ६४ वर्ष पुगिसकें, इच्छा भएर पनि राजनीति गर्ने अवसर जुरेन । हुन त म २०३६ सालमा स्याङ्जा गोली काण्डमा परेको व्यक्ति हुँ । जनमत संग्रहमा बिपीको अंगरक्षक भएर सुरक्षाको काम पनि गरियो । अवस्था यस्तो भए पनि अहिलेको कोलिसन सरकारले गरेको गठबन्धनलाई म सही भन्छु । केही अतिवादी र महत्वाकांक्षीले एक्लै लड्ने भने तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको गठबन्धनको योजनाले कांंग्रेसले ठाउँ जितेको हो । कांग्रेसले राम्रो काम नगर्दा एमालेलगायतलाई भोट गएको छ । समग्रमा त नेपालमा कम्युनिस्टकै भोट बढी छ । राम्रो काम गरेर जनमत बढाए कांग्रेस सफल हुन्छ । आएर तर मात्र खाएर र एक्लै लडेर कांग्रेस उँभो लाग्दैन । र, नयाँ नेतृत्वलाई के भन्न चाहन्छु भने सबैका घोषणापत्र राम्रा छन् । पहिलाकाले पनि राम्रो काम गर्छु भनेकै हुन् तर भनेर मात्र भएन व्यवहारमा उतार्न पर्‍यो । कमीकमजोरी सुधारेर अगाडि बढ्नुपर्‍यो । ठाउँ पाउँदा गरेर देखाउनुपर्‍यो ।